Dagaal culus oo dhexeeya dawladda iyo Al-shabaab oo Muqdisho ka socda iyo ciidamada dawladda oo gudaha u galay suuqa Bakaaraha. – Radio Daljir
Dagaal culus oo dhexeeya dawladda iyo Al-shabaab oo Muqdisho ka socda iyo ciidamada dawladda oo gudaha u galay suuqa Bakaaraha.
Muqdisho, July 28 – Ciidamada dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo iskaashanaya ayaa gudaha u galay suuqa Bakaaraha Muqdisho, halkaas oo muddo ahayd saldhig ay aad ugu xoogbadan yihiin kooxda Alshabab ee dagaalka kula jirta.
Waxa xilligan adag in la helo wararka rasmiga ah ee goobaha dagaalka, sababtoo ah dirirta oo wali socota, haseyeeshee, saraakiil ka tirsan kuwa safka hore ee dagaalka ayaa Daljir u sheegay in ay ciidamadoodu ku sugan yihin bartama suuqa Bakaaraha, sida daarta Dahab-shiil iyo boosteejada baabuurta u safra gobollada waqooyi ee dalka. Ma ay jiraan ilo madax bannaan oo warkaa aanu ka xaqiijinay.
Dad goob-joogayaal ah ayaa noo sheegay in la arkayo ciidamada dawladda oo adkeeynaya difaaca goobaha ay horay ugala wareegeen kooxda Al-shabab iyo waliba ciidamo ku hubaysan gawaarida gaashaaman oo ku sii qul-qulaya goobaha dagaalka. Dhamaan isgoysyada waawayn ee ku hareeraysan suuqa Bakaaraha ayaa waxa fadhiya ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM.
Khasaaraha dagaalka ee rasmiga ah ayaan sidoo kale wali caddayn waxayse xarumaha caafimaadka ee Muqdisho ku soo waramayaan in ay jiraan dhaawacyo la geeyay isbitaallada iyo waliba dhimasho aan caddaddeeda wali la xaqiijin.
Dhanka kalena, Cabdullaahi Cali Caanood oo ah taliyaha ciidamada madaxtooyada ayaa warbaahinta saaka u sheegay in ciidamadu dagaal ay la galeen Alshabab kula wareegeen qaybo badan oo ka tirsan degmada Wardhiiglay ee magaalada Muqdisho.
Ma jiraan wax warar ah, xaqiijin iyo beenin toonna, oo ka soo baxay kooxda Al-shabab.
Daljir kala soco wixii warar ah ee ka soo kordha dagaallada ka socda maanta magaalada Muqdisho.
Dagaallo xooggan oo Muqdisho ku dhex-maraya dawladda iyo Al-shabaab.
Muqdisho, July 28 – Dagaallo aad u culus ayaa saaka ka bilawday magaalada Muqdisho kuwaasi oo u dhexeeya ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa AMISOM oo isku dhinac iyo dhaqdhaqaaqa Al-shabaab.
Dadaalladaan ka soconaya aagag kala duwan ayaa la tilmaamayaa labada dhinac in ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan, kaasoo diryankiisa laga maqlayo inta badan degmooyinka gobolka Banaadir sida ay sheegayaan weriyaasha Daljir ee magaalada Muqdisho.
Saraakiisha dawladda ee dagaalkaasi hoggaaminaysa ayaa sheegay in ay gaareen guulo wax ku ool ah, ayna qabsadeen deegaanno badan oo ay horay ururka Al-shabaab uga talin-jireen.
Warar ka madax-bannaan sheegashada dawladda ayaa iyana xoojinaya warka dawladda, xaqiijinayana guulaha dawladdu gaartay, waxaana jirta hubanti caddaynaysa ciidanka dawladdu in ay tageen goobo aysan waligood gaarin oo fariisimo u ahaa Al-shabaab.
Ma cadda illaa haatan khsaaraha dagaalkaasi uu gaystay hase ahaatee warar madax-bannaan ayaa tilmaamayo labada dhinacba in ay khasaarooyin ka soo gaareen dagaalka maanta, inkastoo la xaqiijinayo khasaaruhu in uu u badan yahay dhinac ururka Al-shabaab oo muddo badan dagaal kula jiray dawladda.
Xaaladda magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey degganayd oo aysan ka dhicin wax iska-horimaaddo ah, waxaana dagaalka maanta uu noqonayaa midkii horreeyey ee ay gasho dawladda uu soo dhissay R/wasaare Prof. Cabdiweli Maxamed Cali ‘Gaas’.